टेस्ट वरियतामा कहिल्यै शीर्ष स्थानमा नपुगेका उत्कृष्ट १० क्रिकेटर - NA MediaNA Mediaटेस्ट वरियतामा कहिल्यै शीर्ष स्थानमा नपुगेका उत्कृष्ट १० क्रिकेटर - NA Media
टेस्ट वरियतामा कहिल्यै शीर्ष स्थानमा नपुगेका उत्कृष्ट १० क्रिकेटर
टेस्ट क्रिकेटलाई अहिले पनि खास क्रिकेट भनिन्छ । टेस्टमा ब्याट्सम्यानको धैर्यताको परीक्षण हुने गर्छ । एउटा भनाई पनि छ ‘यदि क्रिकेटरले टेस्टमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ भने अरु जुनसुकै फरम्याटमा पनि राम्रो गर्न सक्छ ।’ अहिलेसम्म विश्व क्रिकेटमा सफल टेस्ट क्रिकेटर भएर पनि कहिल्यै र्‍याङकिङ (वरियता)मा शीर्ष स्थानमा आउन भने सकेनन् ।
१०. डेमियन मार्टिन (अस्ट्रेलिया) अस्ट्रेलियाका पूर्व ब्याट्सम्यान डेमियन मार्टिनले आफ्नो टेस्ट करियरमा कहिल्यै पनि शीर्ष वरियता हासिल गर्न सकेनन् । टेस्ट करियरमा ६७ टेस्ट म्याच खेल्दा ४ हजार ४ सय ६ रन बनाए । यसबीचमा उनले १३ शतक तथा २३ अर्धशतक पनि बताए । उनको टेस्ट वरियतामा सर्वाधिक उच्च स्थान तेस्रो हो । जुन उनले सन् २००५ को मार्चमा हासिल गरेका थिए ।
९.फाफ डू प्लेसी (दक्षिण अफ्रिका)
दक्षिण अफ्रिकाका फाफ डू प्लेसीले टेस्टमा २०१२ मा डेब्यु गरेका थिए । अहिलेसम्म उनले ६५ टेस्ट खेलेका छन् । जसमा उनको ३ हजार ९ सय १ रन बनाएका छन् । यसबीचमा उनको ब्याटबाट ९ शतक र २१ अर्धशतक बनेका छन् । उत्कृष्ट खेलाडी प्लेसीले पनि अहिले सम्म टेस्ट क्रिकेटको वरियतामा शीर्ष स्थान हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
८.हर्सल गिब्स (दक्षिण अफ्रिका)
दक्षिण अफ्रिकाका पूर्व खेलाडी हर्शल गिब्सले १९९६ मा टेस्टमा डेब्यु गरेका थिए । टेस्ट करियरमा ९० म्याच खेले । जसमा उनले ६ हजार १ सय ६७ रन बनाएका छन् । १४ शतक तथा २६ अर्धशतक लगाएका थिए । २२८ रन उनको उच्चतम स्कोर हो । तर उनी कहिल्यै पनि टेस्ट वरियताको शीर्ष स्थान हासिल गर्न सफल भएनन् । ७. ब्रेन्डन म्याकलम (न्युजिल्याण्ड) न्यूजिल्याण्डका पूर्व कप्तान ब्रेन्डन म्याकलम उत्कृट खेलाडी हुन् । टेस्टमा पनि एक दिवसीय जसरी ब्याटिङ गर्ने गरेका छन् । उनको नाममा टेस्ट क्रिकेटमा तेहोरो शतक पनि छ । १०१ टेस्ट म्याचमा उनले १२ शतक तथा ३१ अर्धशतक लगाएका थिए । यस्तै ४ वटा दोहोरो शतक पनि बनाएका म्याकलम कहिल्यै बरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेनन् ।
६. क्रिस गेल (वेस्टइण्डिज) क्रिस गेल टी २० क्रिकेटमा विस्फोटक ब्याट्सम्यानको रुपमा परिचित छन् । तर उनले टेस्ट क्रिकेटमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन् । टेस्ट करियरमा १८२ पारिमा उनले ७ हजार बढी रन बनाए । १५ शतक बनाएका छन् । उनको नाममा २ तेहोरो शतक छ भने ३ पटक दोहोरो शतक पनि छ । तर उनी अहिलेसम्म उनी टेस्ट करियरमा शीर्ष पाँचको वरियतामा पनि आउन सकेका छैनन् । उनको सर्वाधिक वरियता १० हो ।
५. जस्टिन लेंगर (अस्ट्रेलिया) जस्टिन लेंगर अहिले अस्ट्रेलिया टिमको प्रशिक्षक रहेका छन् । उनले टेस्ट क्रिकेटमा सन् १९९३ मा डेब्यु गरेका थिए । लेंगरले टेस्ट करियरमा १०५ म्याच खेलेका थिए । उनले ७ हजार ६ सय ९६ रन बनाएका थिए । २३ शतक र ३० अर्धशतक बनाए पनि उनी टेस्ट वरियतामा कहिल्यै शीर्ष स्थानमा आउन सकेनन् ।
४. केभिन पिटरसन (इंग्ल्याण्ड) केभिन पिटरसनले २००५ को एशेजमा गरेको प्रदर्शन अहिले पनि चर्चा हुने गर्छ । उनले करियरमा १०४ टेस्ट म्याच खेल्दा ८ हजार १ सय ८१ रन बनाएक । २३ शतक र ३५ अर्धशतक लगाएका उनको २२७ रन उच्च स्कोर हो । उनको सर्वाधिक टेस्ट वरियता शीर्ष तीन थियो ।
३.वीवीएस लक्ष्मण (भारत) भारतीय क्रिकेट टिमका मध्यक्रमका पूर्व ब्याट्सम्यान वीवीएस लक्ष्मण उत्कृष्ट टेस्ट क्रिकेटर हुन् । लक्ष्मणले अस्ट्रेलियाविरुद्ध २००१ मा २८१ रनको पारी खेलेका थिए । लक्ष्मणले करियरमा १३४ टेस्ट म्याच खेल्दै ८ हजार ७ सय ८१ रन बनाए । यसबीचमा उनको ब्याटबाट १७ शतक र ५६ अर्धशतक पनि बन्यो । करियरमा उनी सर्वाधिक सफल वरियता भने शीर्ष ६ मात्रा हो । यो उनले सन् २०११ मा हासिल गरेका थिए ।
२. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) श्रीलकाका सनथ जयसूर्या एक दिवसीयका सफल खेलाडी मानिन्छन् । साथै उनी टेस्ट क्रिकेटका पनि उत्कृष्ट खेलाडी नै हुन् । उनले ११० टेस्ट म्याचमा ६ हजार ९ सय ७३ रन बनाए । १४ शतक ३१ अर्धशतक बनाएका थिए । २००५ मा उनी सर्वाधिक सफल वरियता भने शीर्ष तीन हात पारेका थिए । उनी कहिल्यै शीर्ष एकमा परेनन् ।
१.ग्रीम स्मिथ (दक्षिण अफ्रिका) ९ हजार भन्दा बढी रन बनाएका ग्रीम स्मिथले २७ शतक बनाएका छन् । उनको नाममा टेस्ट क्रिकेटमा ५ वटा दोहोरो शतक छ । तर उनी कहिल्यै शीर्ष १ मा आएनन् । ग्रीम स्मिथ विजयी भएको टेस्टमा सर्वाधिक १५ शतक बनाउने कप्तान पनि हुन् । उनले कप्तानको रुपमा सबैभन्दा धेरै ८ हजार ६ सय ५९ रन बनाएका छन् । उनले करियरमा सर्वाधिक सफल बरियता शीर्ष २ मात्रै हो । यो उनले सन् २०१० मा हासिल गरेका थिए । तर उनी शीर्ष एकमा पर्न भने सकेनन् ।